गरे के हुदैन र ? एउटै फार्मबाट ५ करोडको अर्गानिक कफी विदेश निर्यात « Sajha Page
गरे के हुदैन र ? एउटै फार्मबाट ५ करोडको अर्गानिक कफी विदेश निर्यात
नेपालमा कफीको इतिहास ७८ वर्ष पुरानो छ। हिरा गिरीलाई तत्कालीन समयमा नेपालमा कफीको बोट भित्र्याएको श्रेय दिइन्छ। बर्मामा जागिरे रहेका उनले सन् १९९५ मा बर्माबाट अरेबिया जातको बोट गुल्मीमा भित्र्याएका थिए। त्यही बोटबाट नेपालका ४२ जिल्लामा कफीको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ। – नागरिकन्युजबाट